सामुदायिक विद्यालयको भूमिका र शिक्षा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सामुदायिक विद्यालयको भूमिका र शिक्षा
२०७१ चैत्र १३, शुक्रबार ०२:२२ गते
गएको फागुनको २९ र ३० गते चितवनको रत्ननगरमा नेपाल शिक्षक सङ्घको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय भेला आयोजना भएको थियो । १९ जिल्लाका सामुदायिक शिक्षकहरु भेला भएर विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विकास तथा शिक्षकका पेसागत विकासका सम्बन्धमा व्यापक छलफल र अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको थियो । शिक्षाविद् डा. तीर्थ खनियाले सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने उमेश श्रेष्ठले त्यसमाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो । ३४ बुँदे चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै भेला समापन भएको थियो । “गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक र गुणस्तरीय शैक्षिक प्रबन्ध” भेलाको निचोड रहेको थियो । एसएलसी परीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा भएको यस भेला निकै मह¤वपूर्ण ठानिएको थियो ।
नेपालमा सरकारी स्वामित्वको सरकारी विद्यालयहरुको नामकरण सामुदायिक विद्यालय भनेर गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा झन्डै २,३७,१६६ जना शिक्षकहरु कार्यरत रहेका छन् र झन्डै ७५ लाख विद्यार्थीहरु पढिरहेका छन् । यही तथ्यांकमा गणना भएका हामीहरु सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सामुदायिक शिक्षकको पहिचान बोकेका ह्वाइट वर्करहरु हौँ । यहाँ आर्थिक र सामाजिक रुपले पछि परेका समुदाय तथा परिवारका बालबालिकाहरु पढ्दछन् । यिनीहरुको भविष्य निर्माताको अभिभारा हामीमा रहेको छ जुन वर्तमान कर्पोरेटमुखी शैक्षिक वातावरणमा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
पढेर पास, कामकाजी र सिर्जनात्मक हुनेभन्दा फेल भएर निराश हुनेको सङ्ख्या धेरै छ, यहाँ । एसएलसी दिने ५ लाखमध्ये ५३ प्रतिशश अनि उच्च मावितर्फ ६२ प्रतिशत असफल भएको दोष बोक्नुपर्ने हामी शिक्षकहरु । दैनिक १५ सय विदेशिने दर, एमआरपी बनाउनेको परराष्ट्रमा भीड, १२ कक्षापछि अध्ययन भिसा लिनेको ठूलो सङ्ख्या, कलेजहरुमा स्नातक कक्षाहरु नचल्ने अवस्था आदिले हाम्रो शिक्षाको अवस्था र यसको वकालत कठैबराजस्तै भएको छैन र ? के यो मजस्ता मास्टरले चिन्ता गरेर पार लाग्ला र ? तैपनि, लेख्न मन लाग्यो आज र लेख्दैछु ।
विद्यार्थी कक्षा कोठाको पढाइभन्दा ट्युसन, कोचिङ र सहयोगी सामग्रीका भरमा पास भैरहेका छन् भन्ने निष्कर्ष अनि कक्षा १० मा पुगेको विद्यार्थी अक्षर चिन्न र पढ्नबाहेक केहीमा दक्ष छैन भन्ने कुराबाट आरोपित शिक्षक हामी । बर्सेनि ७५ अर्ब रूपैयाँ (नागरिक करको ७८ प्रतिशत) हाम्रो कार्यक्षेत्रमा लगानी हुँदा पनि प्रतिफल भएन भनेर बहस भैरहेको हाम्रो पेसाको चर्चा । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु ९८ प्रतिशत तालिम प्राप्त भएर पनि निकम्मा भएको टिप्पणी सुन्नुपर्ने अवस्थाले ग्रस्त पेसाकर्मी हामी । यी सबै खाले अवहेलना र आलोचनाको चेपुवामा परेका छौँ, आज हामीहरु । नेपालका हरेक परिवारसँग सम्बन्ध रहेको छ, हाम्रो पेसाको । यो स्थितिलाई परिवर्तन गर्न लाग्नैपर्ने हाम्रो पेसागत अग्रसरता र परिणाममुखी प्रयासको नेतृत्व हामी स्वयंले गर्नुछ अब । हाम्रो पेसागत सुरक्षा, विकास तथा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि हामी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु एकाकार भई अघि बढ्नु आजको राष्ट्रि«य आवश्यकता हो । राष्ट्रका लागि आवश्यक सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाको इन्जिनियरले झैँ हामीले काम गर्नुछ ।
हामीले खानेकुरा, लगाउने कपडा, प्रयोग गर्ने हरेक चीज स्तरीय चाहन्छौँ । समग्रमा जीवन नै स्तरीय होस् भन्ने चाहन्छौँ । उद्योगबाट होस् या अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादित वस्तु होस्, त्यो स्तरीय होस् भन्ने चाहन्छौँ । त्यसैगरी, भविष्यका कर्णधार बालबालिकालाई हामीले चाहेजस्तो योग्य र दक्ष नागरिक तयार गर्न स्तरीय शिक्षा अपरिहार्य छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि यस क्षेत्रमा सम्बद्ध शिक्षक, अभिभावक, कर्मचारीहरुको अहं भूमिका मानिन्छ र यिनीहरु अनवरत रुपमा लागिरहेका हुन्छन् । शैक्षिक गुणस्तर भन्नाले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्नु वा उत्कृष्ट स्तर हासिल गर्नु हो । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि आवश्यक त¤वहरुमध्ये कुनै एक कमजोर भएमा उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । गुणस्तर वृद्धिमा प्रभाव पार्ने त¤वहरु विशेषतः शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षा क्षेत्र हेर्ने कर्मचारीहरु नै हुन् । एउटा सवारी चालकको हातमा त्यसमा सवार कयौँ व्यक्तिको जीवन निर्भर भएजस्तै भविष्यका कर्णधार लाखौँ बालबालिकाको भविष्य निर्माणको जिम्मेवारी सरोकारवाला–हरुको कार्यदक्षता, लगनशीलता, उचित व्यवस्थापन, नीति निर्माण र लगानीमा निर्भर रहन्छ ।
“सबैको लगि शिक्षा”, “अनिवार्य शिक्षा तथा निःशुल्क शिक्षा”, “सुधारको सुरूवात शिक्षकबाटै”, “शिक्षा मौलिक अधिकार”, “गुणस्तरीय शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षक र गुणस्तरीय शैक्षिक प्रबन्ध” भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक मान्यता र अभियानलाई उच्च सम्मानका साथ आत्मसात् गर्दै विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालमैत्री शिक्षण सिकाइमार्फत विद्यार्थीहरुमा सिर्जनात्मक क्षमताको विकास गराई कक्षामा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउन प्रयत्नशील रहनु जरूरी छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा र त्यसको कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । समयको मागअनुसार अंग्रेजी माध्यमका साथै आधुनिक सूचना प्रविधिलाई क्रमशः कक्षा कोठामा प्रवेश गराउने वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्ने समय आएको छ । अनुसन्धानमूलक कार्यमार्फत शिक्षाको स्तर उकास्ने कार्यमा जोड दिनु अपरिहार्य छ ।
वर्षभरि ओझेल पर्ने विद्यालय शिक्षा केही दिनयतादेखि एसएलसी परीक्षाका कारण त्यसको चर्चा पनि नेपाली मिडियामा बढ्दै आएको छ । यो चर्चा एकैपटक पाँच लाखभन्दा बढी सङ्ख्यामा परीक्षार्थीहरु भएरमात्र होइन, परीक्षाको मर्यादा, सुरक्षा प्रसंगहरु र अवाञ्छित हर्कत तथा अविश्वसनीय व्यक्तिहरुको संलग्नताको कारणबाट पनि हो । सँगै राज्यको झन्डै चौँथाइ लगानीको सदुपयोगको प्रसंग त यसै हो नै, अझ अभिभावक र विद्यार्थीको १० वर्षे लगानीको मह¤व त झनै सर्वाधिकार रहेको छ । चर्चा आवश्यक छ, तर परीक्षाको दृष्टिकोणबाट र परीक्षा वा नतिजाको समयमा मात्र यसको चर्चा गरिने प्रवृत्ति कति उचित छ भन्ने कुरातर्फ आज मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ । परीक्षा र नतिजालाई जोडतोडले उठान गर्ने हाम्रा कलमकर्मी, विशेषज्ञ, योजनाविद्, र राजनीतिज्ञहरु केवल शैक्षिक प्रकृयाको उत्पादन त¤वप्रति मात्र केन्द्रित वन्नु कदापि मनासिव हुँदैन । लगानी (भौतिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन) र प्रकृया (शिक्षण सिकाइ कार्यविधिहरु) को सही सञ्चालन र नियन्त्रणमा नियमित रुपमा खबरदारी गर्न दृढ बन्नैपर्दछ ।
एसएलसी परीक्षाको नतिजा नै सर्वस्व हो भन्ने ठान्नु उचित देखिँदैन । यसले टिचिङ टु टेस्टमा अधिक जोड दिन थालेको छ । टिचिङ टु चिल्ड्रेनको मान्यता हराउँदै गएको भन्ने टिप्पणी बढ्दै गएको छ । तल्लो तहको सिकाइ सुनिश्चित नगरी माथिल्लो कक्षामा पदोन्नति गर्ने परम्परा तथा प्रथाले विद्यार्थीको जग कमजोर बनाएकोप्रति कसैले ध्यान दिएका छैनन् । यस्तोमा एसएलसीमा मात्र विद्यार्थीको उपलब्धि खोजिनु र नभेटिनु अनौठो मान्नुपर्ने देखिँदैन । जुन स्कुलमा जसरी भए पनि विद्यार्थीलाई परीक्षामा पास हुने किसिमले रोबर्ट झैँ तयार पारिन्छ, त्यहाँको नतिजा राम्रो देखिनु कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । शिक्षा व्यवस्था खस्केकोमा तारो बनाइएका शिक्षकहरुलाई अन्याय भैरहेको छ । यसको जिम्मेवारी सरोकार सबैले लिन सक्नुपर्दछ । शिक्षकको मनोबल घटाउने, मानमर्दन गर्ने र उनीहरुलाई कमजोर पार्ने काम कहीँकतैबाट नहोस् । आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउने कथित शिक्षाविद्हरुले नीति बनाउने शिक्षा सामग्री लेख्ने अनि अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने अवस्था रहेसम्म सार्वजनिक शिक्षाको सुधार हुने अपेक्षा कमै देखिन्छ । विद्यालय मर्ज गर्ने नीति अघि सारेको अवस्था तथा विगत ५ वर्षदेखि प्रयास गरेको शिक्षा ऐन ल्याउने काम अझै अल्झिएकै अवस्थाले सामुदायिक विद्यालय सुधारको काम अघि बढिहाल्ने छाँट देखिँदैन । फेरि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग बन्ने चर्चाले झन् यो अवस्था एकाध वर्ष लम्बिन सक्ने देखिँदै छ ।
आउँदो वर्षबाट एसएलसीमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने चर्चाले सबै स्वतः पास हुन्छन् भनेर शिक्षण जिम्मेवारी हलुका हुने एकथरी शिक्षकको टिप्पणी छ भने विद्यार्थीहरु पनि फेल नहुने भनेर धेरै पढ्न नपर्ने कुराले खुसी देखिन्छन् । यस्तो त छ, हाम्रो शिक्षाको वर्तमान हविगत । अहिले कक्षा १ देखि कक्षा ७ सम्मको निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली ८० प्रतिशत निष्प्रभावी रहेको गुनासो व्यापक रहेको छ । विद्यालयमा नतिजा निकाल्ने बेलामात्र एकैपटक मूल्याङ्कन फारममा हचुवा रेजा र अङ्क चढाउने गरेको टिप्पणी तथा जनगुनासो अत्यधिक रहेकोप्रति हामी संवेदनशील बन्नैपर्दछ ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कुनै एउटा पक्षमात्र जिम्मेवार नभएर शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीका अतिरिक्त वि.व्य.स., शिक्षक अभिभावक संघ सबैको मह¤वपूर्ण दायित्व र भूमिका हुन्छ । नेपालको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक अवस्था उकालो लाग्नुको साटो ओरालो लागिरहेको छ । नयाँनयाँ खोज, अनुसन्धान, अन्वेषण र विश्लेषण होइन, संकलन गर्ने प्राज्ञिक चरित्र बन्दै गएको छ । विज्ञान र प्रविधिले संसार साँघुरिएकाले विश्व एक आँगनमा परिणत हुँदै जान लाग्दा पनि विश्व बजार सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्यसम्म बोक्न कठिन महसुस भैरहेको छ । प्राज्ञिक प्रकाशन, शैक्षिक प्रशासन, परीक्षा प्रणालीप्रति कतै सन्तोष लिने ठाउँ रहेको छैन । प्राज्ञिक निर्णयबिना राजनीतिक आधारमा विद्यालय खोल्ने होडबाजीले देशको शैक्षिकस्तर कता जान लाग्यो भन्ने दिशा अन्योलमा छ । यसको मुख्य कारण राष्ट्र पद्घतिमा हिँड्न नसक्नु हो । जबसम्म मूल्यमान्यता, दक्षता र सीपको कदर नभई वर्ग, विचार, नातेदार, आसेपासेलाई भित्र्याएर प्राज्ञिक संस्थाहरु चलाइन्छ, तबसम्म यो अवस्था सप्रिँदैन, बरू झन् दिनानुदिन बिग्रँदै जानेछन् । शैक्षिक संस्थाहरु पद्घतिमा नहिँडेमा देशको आउँदो अवस्था दर्दनाक हुन सक्नेतर्फ हामीले बेजोड खबरदारी गर्नैपर्दछ । मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि गुणस्तरीय एवं जीवनोपयोगी शिक्षा अपरिहार्य छ । त्यसैले, सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिकस्तर वृद्धिका लागि जिम्मेवारी एकअर्कामा पन्छाउनुभन्दा सरोकारवालाहरु सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढे अपेक्षित लक्ष्य पक्का पूरा हुनेछ ।
(लेखक, नेपाल शिक्षक संघ चितवनका उपाध्यक्ष हुन् ।)